नेपाल’मा ब’न्छ यस्तो आ’’र्ष’क घ’र, को’रि’या’ली क’म्प’नी’ला’ई जि’म्’मा दि’नु’हो’स ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/नेपाल’मा ब’न्छ यस्तो आ’’र्ष’क घ’र, को’रि’या’ली क’म्प’नी’ला’ई जि’म्’मा दि’नु’हो’स !
काठमान्डौ – ‘कोरि’या”ली’ कम्पनि एसवाई प्यानलले( SY Nepal) आफ्नो उत्पादन शुरु गरेको छ । फेब्रिकेटेड भवन निर्माण सम्बन्धि सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले यसै हप्तादेखि उत्पादन शुरु गरेको हो । नेपालका बिभिन्न जिल्लामा कम्पनिबाट विभिन्न रंगहरुमा छाना तथा वाल प्यानलहरु उत्पादन शुरु गरेका छन् ।
छोरासँग को सम्बन्धले बच्चा जन्माएकी आमा र छोरा मिडिया`मा,आमा भन्छिन त्यो बेला होस भएन (भिडियो हेर्नु`होस)